Sunday May 28, 2017 - 01:20:51 in Somali News by Super Admin
Thabid Cabdi oo isticmaalayo tasiilaadka safaaradda waxa uu hoos ka bilaabay in uu xiriir toos ah la sameeyo hay'ado iyo shaqsiyaad Maraykan ah oo uu ku qancinayo in mudane Xassan Shiikh uu yahay qof aan lagu sii aamini karin mas'uuliyadda
Thabid Cabdi oo isticmaalayo tasiilaadka safaaradda waxa uu hoos ka bilaabay in uu xiriir toos ah la sameeyo hay'ado iyo shaqsiyaad Maraykan ah oo uu ku qancinayo in mudane Xassan Shiikh uu yahay qof aan lagu sii aamini karin mas'uuliyadda qaranka. Isaga oo isticmaalayo magaca safaaradda Soomaaliya ayuu bilaabay burburinta dowlada Soomaaliya.
Sida ku cad xeerka dublamaasiyadda , shaqada ugu weyn ee uu qabto ku Xigeenka Safiirka waa aruurinta arrimaha Sirdoonka ama waxa loo yaqaano "intelligence gathering”. Hogaaminta hoowshaas ayaa waxey u sahashay in uu si toos ah ula xiriiro hay’adaha sirdoonka. Tani waxa ay siisay fursad iyo awood siyaasadeed oo lagu aamino warbixntiisa.
Baaritaan dheer ka dib waxaan ogaanay in Mudane Thabid Cabdi Maxamed, isaga oo isticmaalayo tasiilaadka safaaradda uu isku xir u sameeyay Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo dhowr shirkadood, qaarkoodna qarash bixiyeen. Inta uu ku sugnaa Washington DC waxa uu si toos ah uu ula xiriiray shirkadda ACADEMI a Constellis company, fadhigeeda iyo xafiiskuna ku yaalo degmadda Reston oo ka tirsan gobolka Virginia. Waxaaa ayna ku leedahay saldhigyo waa wayn goboladda Oregon, North Carolina, Florida iyo deegaano badan. Waxa ayna ka wadaan qaybo ka mid ah Africa howlgal Ciidan. Waxaa sidoo kale uu fududeeyay kulamo gooni gooni ah uu la qaatay shirkadda MAGNI international Operations oo dhowr mar timid magaalada Muqadishu, xirirna uu horay ula sameeyay inta uu ka shaqaynayay xarunta Madaxtooyadda.
Kulamadaaan iyo qorshooyinkaan waxaa gadaal ka hogaaminyay safiirka Soomaaliya u fadhiyay magalaada Nairobi Jamal Maxamed Hassan, hadana ka mid noqday golaha wasiirada ee dowladda Farmaajo. Safiir Jamaal ayaa isku xirka kala shaqeeyay Thabid suura galna ka dhigay in kulamadda qaarkood qabsoomaan.
Shirkadda ACADEMI ayaa waxaa laga ballanqaaday in lagu wareejiyo hoteladda waaweyn ee ku yaalo magaalada Muqdishu uuna ugu horeeyo hotelka AL Curaba Hotel, isaga oo lala mataanaynayo hotel ku yaalo magaalada Kabul. Hotelkaan ayaa noqon doono mid laga dhigo doono green zone hotel oo ah meel dadka shisheeyaha ama ajnabiga ah soo dagaan. Waxaa sidoo kale ku kulmay magaalada Nairobi saraakiisha shirkadda Magni international operation iyo Farmaajo. Kulankan oo uu qayb ka ahaa Xassan Cali Kheyre oo hadda ah Ra’iisal Wasaraha Soomaaliya. Go’aanada ka soo baxay kulamadaas waxaa ka mid ahaa in garoonka Dayniile lagu wareejiyo shirkada iyo xaruntii hore ee lidka diyaaradaha, iyada oo goobtaas laga dhigayo xarunta la dagaalanka argagaxisada.
Waxaa kaloo la ballanqaaday in ciidan gaar ah loo dhisi doono magaalada Muqadishu kaasoo ay tababari donaan shirkadaha kor ku xusan. (Dhawaan ayey ahayd markii Ra’isal Wasaare Kheyre ku dhawaqaay dhismaha ciidan logu xasilinaayo magaalada Muqdisho).
Ciidankaas waxaa qarashkiisa bixinaaya shirkada MAGNI ee kor ku xusan waxaana la isticmaalayaa model kii horay loogu sameeyay Magaladda Kabul ee Afghanistaan. Qodobada kale waxa ka mid ah ahaa in la soo afjari doono qandaraaskii horay shirkaddo Soomali ah loogu siiyay ilaalinta badda Soomaaliya. Qandaraas cusubna la siin doono ACADEMI iyo MAGNI.
Si loo xaqiijiyo in uusan Hassan Sheikh iyo dowladiisa soo noqon qorshaha kor ku xusana u suura galo, waxaa Ambassador Jamal, Fahad Yasin iyo Thabid isku bahaysteen in dagaal lagu qaado Hassan Sheikh iyo dowladiisa laguna eedeeyo in ay tahay mid ka soo horjeedo danaha dowladaha qaarkood, haddii Hassan Sheikh soo noqdana dagaal sokeeye Soomaliya ka dhaci doono. Thabid iyo Ambassador Jamal waxaa ay isku dayeen in ay Fahad Yasin & nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Cabdikarin M. Hiraabe Gaambe Visa – dal ku galka Maraykan ah looga qaado safaaradda Maraykanka si uu kulamadda uga qayb-gallo. Qoraallo ay is dhaafsadeen Jamal iyo Safaaradda USA ayaa Fahad Yasin loogu diiday visaha dal ku galka USA, isagoo la sheegay in uu ku jiro liiska NO FLIGHT LIST. Waxaase loo ogolaaday Gaambe iyadoo VISAHA Gaambe laga dhigay inuu ka qeyb galaayo shirka ganacsiga Africa (US AFRICA BUSINESS FORUM) ee lagu qabtay magaalada New York bishii September 21, 2016.
Dardar galinta burburinta dowladii hore, waxaa Thabid bilaabay in uu sameeyo isku xir shirkado Mareykan ah iyo raggii waday ololaha doorashada Farmaajo. Waxaa uu Thabit isku xiray Shirkad ah lobbiest oo lagu magacaabo Park Strategist uuna hoggaamiyo nin ka mid ahaan jiray aqalka wakiiladda ee Maraykanka mudane Alfonse Marcello "Al" D'Amato, iyo Cabdikariim Gaambe oo ka mid ah milkiilayaasha Hotel Jazeera, inta uu joogay shirkii Africa Business forum.
Fulinta barnaamijkaan waxaa qayb ka ahaa Safiir Jamal Maxamed, Fahad Yasin iyo Thabid Abdi, Xasan Cali Kheyre oo isagu la shaqeeynayay markaas Madaweyne Xassan Sheekh, si qarsoonna ula shaqeeynayay raga kor ku xusan, Mudane Xassan Khayre ayaa bixiyay lacag gaaraysa $200,000 labo boqol oo kun bilowgii ololaha doorashada ee Farmaajo.
Shir sadax geesood ah oo ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah sirdoonka Kenya iyo kuwo Norway ayaa waxaa ka wada qayb galay, Gaambe, Fahad Yasin, Xassan Kheyre Safiir Jamal iyo Xildhibaan Cabdishakur Cali Mire. Shirkaan wada jirka ah waxa uu ka dhacay Hotel-ka lagu magacaabo Hemingway’s oo ku yaalo duleedka magaalada Nairobi.
Waxaa nasiib xumo ah in madaxweyne Farmaajo uu adeegsado Thabid Cabdi Maxamed iyada oo lagu bur-burinayo dowladdnimada Soomaaliyeed. Magacaabista Thabid waxa ay u muuqata in loogu talagay in lagu fuliyo dano gaar ah laguna xaqiijiyo in dib loo soo celiyo lacagihii ku baxay doorashada. Deeq bixiyayaasha Soomaaliya (hay’ado iyo wadamaba) oo kulamo qaar ah la yeeshay madaxweyne Farmaajo ayaa uga digay magacaabista Thabid iyo dhibaatada ka imaan karto. Xiligaan ? La soco xogo xasaasiya oo la xiriira sirtaan ,qeybaha ugu xiisaha badan uga boggo qeybta 3-aad.